Orodyahanka Bolt Oo Amaan Weyn U Soo Jeediyey Taqtarka Kooxda Bayer Munich Ee Hans Wilhelm - jornalizem
Orodyahanka Bolt Oo Amaan Weyn U Soo Jeediyey Taqtarka Kooxda Bayer Munich Ee Hans Wilhelm
Orodyahanka reer jamaica Usain Bolt ayaa u mahadceliyey kooxda Bayer Munich iyo taqtarkeeda Hans Wilhelm Muler-Wohlfahrt doorka ay ku lahaayeen guusha uu ka gaaray tartanka orodka boqolka Mitir.
Bolt ayaa waxaa uu qabay muruq xanuun lix toddobaad kahor isagoo markaasi ku guuldareystey tijaabooyinkii kahoreeyey tartanka Olympicska ee orodada 100m iyo 200m waxaana kaga guuleystey ninka ay isku dalka ka soo jeedaan oo ay tababarka wada qaadanayeen ee Yoham Blake.
Bolt ayaa ku booqday Dr Wilhem magaalada Munich isagoo talooyin iyo daaweynba weydiistay.
“Wuxuu qeyb weyn ku leeyahay guusheyda iyo mustaqbalkaygaba,”ayuu yiri Bolt.
“Waxaan booqanayay tan iyo 18jirkeygii, runtii howl weyn ayuu ii qabtay, orodadii tijaaboyinka ahaa kadib waxa uu fiiriyey murqahayga wuu I daweeyey wuxuuna igu yiri ha walwalin wax weyn ayaad samayn doontaa ee noqo tababarkana qaado.’”
Bolt waxa uu ku tilmaamay taqtarka kooxda Bayern Munich kan ugu fiican caalamka.
“Wuu igala weyn yahay aniga taqtar kaliya,wuxuu ii kaxeeyaa qado,wuu I xanaaneeyaa,wuxuuna ii yimaadaa maalmaha fasaxa ah si uu ii daweeyo wuxuuna hubiyaa inaan wanaagsanahay, waan u mahadcelinayaa dhamaan waxyaabihii uu ii qabtay.”ayuu sii raaciyey orodyahan Bolt.
Inkastoo uu Usain Bolt amaanay kooxda Bayern Munich iyo taqtarkeedaba, hase ahaatee waxa uu yahay nin si weyn u taageera kooxda Manchester United waxana uu hore u sheegay in uu jeclaan lahaa in mar uun u safto kooxda Man United.
Si kasta ha ahaatee taqtarka kooxda Bayern Munich ayaa waxa uu yahay taqtar aan ku koobnayn ciyaaryhanada kubbada cagta gaar ahaan kuwa Bayer Munich, hase yeeshee waxa uu hore u daweeyey ciyaartoy caan ka ah caalamka ah.